Rosia · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Novambra, 2012
Fanoherana 29 Novambra 2012
Fitantanam-pitondrana 27 Novambra 2012
Fahalalahàna miteny 25 Novambra 2012
Fifandraisana iraisam-pirenena 21 Novambra 2012
Noesorin'i Putin Ny Minisitry Ny Fiarovana Mba Hisondrotan'ny Mpandova azy?
Fitantanam-pitondrana 20 Novambra 2012
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, vonona hifidy indray an'i Barack Obama ho filoham-pirenena ny Amerikana, nanapaka ny finamanany efa ela tamin'i Anatoly Serdyukov i Vladimir Putin, minisitry ny Fiarovana tao Rosia nanomboka tamin'ny taona 2007 i Anatoly Serdyukov. Sergei Shoigu, Governoran'i Moskoa sy lehiben'ny Minisitera Misahana ny Toe-draharaha Maika (MChS) no notendrena hisolo...
Ny Fikorontanan'ny Nasionalisma Rosiana
Fanoherana 17 Novambra 2012
Tamin'ity taona ity, nanandratra avo ny anarany ny Andron'ny Firaisankina, saingy tamin'ny fomba tsy nampoizina. Tao anatin'ny tanàna 46 manerana an'i Rosia [ru], isany i Mosko, olona teo amin'ny 3 alina teo no nandray anjara tamin'ireo famoriam-bahoaka nataon'ny farany havanana. Na dia ampahany faran'izay kely dia kely amin'ny totalin'isan'ny mponina aza izany, ny Andron'ny Firaisankina nataon'ny vondron'ny farany havanana dia nahasintona mpanohana maro nanerana an'i Rosia
Rosia, Tadjikistan : Iza No Mahatsiaro Ho Tohina Amin'ilay “Torohay Ho An'ireo Mpiasa Mpila Ravinahitra”?
Tajikistan 16 Novambra 2012
Naneho hevitra momba ilay «Torohay ho an'ireo mpiasa mpila ravinahitra» nivoaka tany Rosia ny sampana natao ho an'ny tanora ao amin'ny antoko "Parti démocratique populaire" ao amin'ny fitondràna ao Tadjikistan. Kanefa, ny mpanoratra ity lahatsoratra ity dia mahita hoe mihevitra ny amin'ireo teratany tadjiks sy ny firenena niavian'ireny mpiasa mila ravinahitra ireny i Rosia.
Ny Fientanentanana Faran'ny LiveJournal, Miaraka Amin'ny Famelàn'ny Hery Manokana Rosiana
Ady & Fifandirana 14 Novambra 2012
Noforonin’olona tsy nitonona anarana ny bilaogy LiveJournal hardingush [ru] tamin’ny 15 Septambra 2012. Mbola tsy nisy roa volana akory izay, ilay bilaogy, mitondra ny lohateny hoe Spetsnaz Ingushetii (Ny tafika manokana Ingush), dia laharana faha-425th[ru] ao amin’ny fandaharana ankapoben’ny mpampiasa LJ. Nametraka tsikera mihoatry ny 4,000 tanatin’ireo lahatsoratra samihafa ao anatiny ireo mpampiasa aterineto. Ny efatra tamin’ireo lahatsoratra ireo dia tafiditra tao amin’ny lisitr’ireo 25 voalohany [ru] amin’ny mpitoraka bilaogy Kaokaziana tavaratra tamin’ny volana Oktobra. Fa iza marina moa no ao ambadik'io bilaogy io?
Ny Hevitry Ny Rosiana Manoloana Ny Fahalanian'i Obama Ho Filoham-pirenena Indray
Amerika Avaratra 13 Novambra 2012
Nifarana ihany ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana, hiatrika fe-potoam-piasana faharoa amin'ny maha-filohan'i Etazonia azy i Barack Obama. Hatramin'ny fampielezan-keviny voalohany tamin'ny taona 2008, ilay profesora demokraty ao Stanford no mpanolotsaina voalohany an'i Obama mikasika ny politika Amerikana-Rosiana izay lasa ambasadaoro Amerikana any Rosia tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Niara-nametraka ny fifandraisana indray amin'ny Federasiona...
Hafanàm-po nomerika 13 Novambra 2012